"Waxaan hadda Imaam ka ahay Misaajidkii aan mar doonayay in aan ku xasuuqo Muslimiin badan" - BBC News Somali
"Waxaan hadda Imaam ka ahay Misaajidkii aan mar doonayay in aan ku xasuuqo Muslimiin badan"
11 Nofembar 2019
Lahaanshaha sawirka Lansing Journal
"Waxaa jirkeyga ka buuxay naceybka aan u qabo diinta Islaamka, waxaan necbaa waxwalba oo la xiriira Islaamka, waxaan sidoo kale necbaa qofka aaminsan diinta Islaamka, waxaana aaminsanaa in diinta islaamka ay lamid tahay cudurka kansarka, dhibaatana ku tahay dunida", ayuu yiri Richard oo ka shekeenayay marxaladii u soo maray iyo waxa uu ka aaminsanaa diinta Islaamka.
Richard isagoo 25 sano jir ayaa lagu qasbay in uu ka fariisto ciidamada Mareykanka, maadaama uu kusoo dhaawacmay dalka Ciraaq oo uu ka dagaalamayay, oo waxaa uu sidaas ku noqday hawlgab. Cadowgiisa koowaad waxaa uu xiligaas u arkayay in ay tahay diinta islaamka, waxaana ku dhashay go'aan ah sidii uu uga aargoosan lahaa dadka heysta diinta islaamka.
Markii uu dib ugu laabtay Magaalada Muncie ee gobolka Indiana ee dalka Mareykanka oo ah halka ay ku nool yihiin isaga iyo qoyskiisa, waxaa uu go'aansaday in uu waxyeeleeo dadka heysta diinta Islaamka iyo xarumaha ay ku cibaadeystaan, maadaama xiligaas ay ku weyneyd Islaam naceybka, waxaana uu qorsheeyay in uu qarxiyo Misaajiid ay ku tukadaan dad badan oo kunool Magaalada Muncie.
Misaajid ayuu dad ku laayay balse ciqaab adag ayuu la kulmay
Magaalo Itoobiya ku taala oo aan Muslimiinta loo oggolayn inay Misaajid dhistaan
Lahaanshaha sawirka Press and Guide
Image caption Waxaa uu mar damcay in uu dilo 200 oo qof oo Muslimiin ah
Madaama uu Richard ahaa ciidan, waxa uu farsameeyay qarax uu doonayay in uu ku weeraro Misaajidka, halkaas oo ay maalin walba ku tukadaan dad gaaraya 200 qof oo isugu jira caruur, haween iyo rag.
Markii uu sidaas qorsheeyay ayaa hadana waxaa uu ka baqay in la ogaado, kadibna la xiro, waxaana uu hakiyay qorshihii uu damacsanaa.
Richard ayaa BBC-da u sheegay in intii uu ku guda jiray qorshahaas ay ogatay gabadh yar oo uu dhalay, taas oo iskoolka ay saxaiibo ku yihiin arday Muslimiin ah.
Gabadhiisa ayaa kula talisay in uu joojiyo weerarka uu doonayo in uu ku qaado Muslimiinta, waxaana hadalka gabadhiisa ay keentay in uu badelo maskaxdiisa, oo waxaa uu go'aansaday in uu aado Misaajidka, kadibna uu la kulmo Muslimiinta, go'aankaas oo badelay noolashiisi ku saleysneyd Islaam naceybka.
Markii uu tegay Misaajidka waxaa uu la kulmay Maxamed Sabih oo ah nin Islaam ah, kana soo jeeda dalka Afghanistan, waxaana uu ka dalbaday in uu doonayo in uu ogaado diinta Islaamka waxa ay tahay.
Maxamed ayaa markii uu arkay ninkan waxaa uu gacanta ka saaray nuqul ka mid ah Qur'aanka Kariimka, oo waxaa uu ku yiri "Orod oo soo akhriso, kadibna iisoo laabo, oo I weydii wixii su'aal ah ee aad qabto".
Xaaskiisa ayuu sidoo kale sheegay in ay gacan ka geysatay sidii uu uga wantoobi lahaa qorshaha uu doonayay in uu ku laayo laba boqol oo Muslimiin ah, waxaana uu sheegay in marwalba ay ku dhihi jirtay: "Dadka waxay isugu jiraan kuwa wanaagsan iyo kuwa xun, waxaana laga yaabaa in aad aragtay kuwa xun ee Muslimiinta ee falkan haku degdegin".
Lahaanshaha sawirka USMC
Image caption Richard ayaa ciidanka Mareykanka ka tirsanaa 25 sano
McKinney ayaa markii uu soo akhriyay Qur'aanka waxaa uu sheegay in uu soo ogaaday in dhamaan waxyaabaha ay daliishadaan kooxaha Islaamiga ee jihaad doonka ah aysan waxba ka jirin, sidoo kalena uu yaqiinsaday waxyaaba badan oo lagu dhaliilo diinta Islaamka, kuwaas oo uu sheegay in ay yihiin kuwa aan waxba ka jirin.
Waxaa kale oo uu sheegay in wixii inta ka dambeeyay uu go'aansaday in wakhti badan ku bixiyo Kitaabka Qur'aanka, si uu wax uga fahmo waxa ku qoran, arritaas oo uu sheegay in ay ka caawisay in uu waxbadan ka fahmo diinta Islaamka iyo waxa ay fareyso.